I-EcoCabin ehonjiswe ngamaplanga ibekwe kwindawo yeenduli zaseShropshire ngobuhle obubalaseleyo. Ilungele iintsapho, abahlobo kunye nezibini ezijonge ukuphononongwa kwelizwe kunye nokubaleka okuthe cwaka.
Ime kwiNdlela yeShropshire, ukuhamba imizuzu eli-10 ukuya kwiNqaba kaBhishophu, idolophu yoyilo lwentengiso ebamba inyambalala yeminyhadala, kubandakanya iReal Ale Trail ebhiyozela iidolophu ezi-6 kunye nee-2 zotywala basekhaya.
I-EcoCabin yeyona inkulu kwiikhabhathi ezimbini ezibekwe eFoxholes Campsite.
Inegumbi elinye lokulala elinamagumbi amabini, amagumbi ama-2, igumbi elimanzi kunye nekhitshi elicwangcisiweyo elixhotyiswe ngokupheleleyo / isidlo sangokuhlwa / igumbi lokuphumla elinesofa ephindwe kabini kunye neTV.
I-Datcha yenzelwe ukuba isebenzise ngokupheleleyo iimbono ezikhangayo ezijikelezayo, kunye neveranda egqunyiweyo kunye nenani elikhulu lendawo yangaphandle kunye neebhentshi.
Ikhabhinethi igqunywe ngokupheleleyo ngobushushu obuphakathi.
Iiduvethi kunye nemiqamelo zikhona, kodwa kuya kufuneka uze nelinen yakho kunye neetawuli.
I-EcoCabin ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-hob/i-oveni enobungakanani obupheleleyo, isikhenkcisi sefriji, iTV kunye nesifudumezi esembindini. Ukuba kukho enye into oyifunayo, nceda ungalibazisi ukubuza.
4.84 ·Izimvo eziyi-53
4.84 · Izimvo eziyi-53
I-EcoCabin imi kwindawo yokukhempisha yosapho. Ngokuqhelekileyo siya kuba kwindawo okanye umcimbi wemizuzu kude.